दुधमा बेसार मीसाएर पिउनुहोस् नसोचेको फाइदा ! - Experience Best News from Nepal
दुधमा बेसार मीसाएर पिउनुहोस् नसोचेको फाइदा !
हामीले बेला बेलामा स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने केहि न केहि हेल्थ टिप्सहरु दिंदै आइरहेका छौं । आज पनि हामीले त्यस्तै अर्को उपयोगीमुलक हेल्थ टिप्स दिन लागिरहेका छौं।
बेसार त् हामी सबैलाई थाहै छ । हामी प्रत्येकको भान्सामा बेसार हुन्छ । बेसारमा एन्टिबायोटिक हुन्छ । यसले छाला, पेट तथा अन्य रोगठिक पार्छ ।त्यस्तै दुधमा पनि प्राकृतिक एन्टिबायोटिक रहेको हुन्छ । यसले शरीरमा हुने प्राकृतिक संक्रमणलाई रोकथाम गर्दछ । त्यसकारण बेसार र दुधलाई मिसाएर सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई यी फाइदा हुन्छन्ः
डन्डीफोर हटाउने ७ सामान्य घरेलु उपाय जान्नुहोस्
अदुवा एक लाभ अनेक, जाडोमा अदुवा को प्रयोग कसरि गर्नेत ? जान्नुहोस्
लसुन र मह मिलाएर खानुहोस्, नसोचेको यतिधेरै फाइदाहरु
मह र लसुनको चमत्कारिक फाइदाहरु येस्त छन् !
जाडो मौसममा अदुवा चियाका फाइदै फाइदा